Chigadzirwa Tsananguro Silicone rabha pamushini wekugadzira makadhi laminator yakagadzirirwa uye kugadzirwa nekambani yedu yakazvipira kutsigira indasitiri yekugadzira makadhi zvinoenderana nezvinodiwa mumusika, inokodzera marudzi ese emakadhi ebhangi, makadhi echikwereti uye kugadzirwa kwemakadhi akachenjera. Iyo silicone yerubhu cushion inogadzirwa nekambani yedu inoshandisa marudzi maviri ehurongwa hwekuumbwa, iyo KXM4213, mativi maviri silicone rabha ine pateni, yepakati layer fiberglass machira. KXM4233, mativi maviri akanzwa, epakati la ...
Chigadzirwa Midziyo Silicone rabha pepa regirazi indasitiri chinhu chakakosha chekambani yedu yakatsaurirwa kutsigira girazi rinoyerera laminated vira maererano nezvinodiwa nemusika. Laminated girazi rinobvisa vira rinoshandisa vhuvhuru musimboti, ita kuti girazi ridziyirwe pasi pemamiriro ekutsvaira, nemhepo yekumhepo, rega girazi muhombodo yekubhegi yakamanikidzwa kubvisa mweya uye isingakwanise kuita matema, bhegi rekuvharira riri pasi pekupisa uye pombi inoputirwa mamiriro kuita maviri kana zvimwe zvidimbu zvegirazi uye EV ...
Silicone rabha pepa remuchina wekudhinda Silicone rabha pepa rekutsikirira dhizaini yakagadzirirwa uye kugadzirwa nekambani yedu yakazvipira kutsigira iyo yekudhinda muchina maererano nezvinodiwa nemusika. Silicone rabha pepa remuchina wekudhinda chinhu chakakosha chemuchina wekudhina muchina, ichave nekukanganisa kwakanangana nekushanda kwefirimu uye kushandisa mutengo wevheji yekudhinda. Silicone yerabha pepa rekutsikirira dhizaini inogadzirwa nekambani yedu inoshandisa chiGerman chakatengwa zvigadzirwa, inogadzira yakanakisa kugadzirwa ...
Hunhu ihwo hupenyu hwebhizinesi. Iyo kambani inonamira kukoshesa kukuru mukutonga kwehunhu hwechigadzirwa. Iyo ine boka rehunyanzvi hwemhando yepamusoro manejimendi vashandi, vakagadzirwa nehunyanzvi chigadzirwa ma laboratories, makamuri ekuyedza, uye marabhoritari.
Iyo yakasarudzika silicone ndiro yeiyo laminated girazi indasitiri chinhu chakakosha chikamu chekambani yedu chegirazi rinoyerera laminating vira maererano nemusika kudiwa.
yakanakisa kupfeka kuramba uye kubata kwakanaka performance.use muindasitiri yemachira semachira ekudhinda, akadai sejeti, mvura, shaft, gripper loom uye machira ekuongorora muchina, kudhinda uye yekudhiza michina.
Yedu yekambani uzivi kuhwina musika nekukwikwidzana uye kushandira pamwe, kusanganisa masimba ekugadzira, kuvaka mhando nekutendeka, uye kuruka ramangwana nebasa.